musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Mazhinji maBrits Aisazotarisira Mabhizinesi Asina Kuvharirwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mazhinji maBrits haadi kuchengetedza mabhizinesi asina kuvharwa
Asingasviki hafu yeBritish vakaratidza kuda kuramba vachishandisa nyanzvi isina kubayiwa.
22% yevakapindura vakati izvo "zvechokwadi" hazvichashandise masevhisi evasina kubatsirwa vashandi.
29% yevakapindura vakati "zvimwe" vanodzivirira vasina kuvhenekera nyanzvi.
20% yeBrits ingango "pamwe" inoshandisa mabhizinesi asina kubayiwa.
Zvinoenderana neongororo yazvino yakaitwa uye yakatumirwa nezuro, vanopfuura makumi mashanu muzana vevagari vekuUK havangadzokere kubhizimusi ravakamboshandisa kare dai munhu aiita bhizimusi iri asina kubayiwa nhomba.
Sezvo nyika iri kuramba ichidziya kune hurumende COVID-19 kurambidza pane zvekutengeserana nekufamba, isingasviki hafu yevaBritish vakaratidza kuda kuramba vachishandisa nyanzvi isina kubayiwa.
Vanenge chikamu chimwe muzvina (22%) chevaya vakabvunzwa vakati ivo "zvechokwadi" havachaiti bhizinesi nenyanzvi dzisina kubayiwa, kunyange dai vaive nemabasa akanaka munguva yakapfuura.
Kuongorora vanhu vakuru vemaBritish 4,631 29, sarudzo yakawana kuti huwandu - 19% - yevakabvunzwa vakati "zvimwe" havachashandise nyanzvi yavaimbove vakatsigira vachiziva kuti "havana kutora uye [havasi] kutora COVID -XNUMX nhomba. ”
20% yeBritish vaive paruzhowa, vachibvuma kuti "vangangoramba vachishandisa" nyanzvi, nepo 14% ichinamatira nehunyanzvi hwavo, kupfura kana kusapfura. Izvo zvakasara zvaive zvisina chokwadi - asi vangangofanira kutora danho munguva pfupi, sezvo hurumende yeUK ichienderera mberi nekufungisisa kuburitswa kwepasipoti kwemajekiseni mushure mekuvazivisa kuti vanofanirwa kudzokera kunzvimbo dzehusiku mushure mekukiya.
Vakapindura kumaodzanyemba kwe England vaive vangangopandukira vashandi vavo vasina kubayiwa, asi avo vekuchamhembe vainyanya kuramba vachishanda navo. Saizvozvowo, vavhoti vanochengetedza vaive nemukana wekuchengeta nyanzvi dzavo, nepo Liberal Democrats ndivo vainyanya kuvakanda padivi.
Vapori vakapindura vanoita kunge vari kuwedzera kukumbira zvirambidzo zvinoiswa pazvinhu zvavo nehurumende, iine 60% sezviri kutsigira "mapasipoti ekudzivirira" kune chero munhu anoshanyira imba inochengeterwa vakwegura, jimu, nzvimbo yemitambo, nzvimbo yekudyira, nzvimbo yekudyira, kana imwe nzvimbo inoungana ruzhinji mune kumwe kuongorora inoitiswa naWeGov svondo rapfuura. Nekudaro, mubvunzo wakadomwa zvakasiyana zvakasiyana, zvichisimbisa kushomeka kwemazuva ekupedzisira ekushandiswa kwemapasipoti akadaro nekubvunza vakapindura chete kana vakatsigira mapasipoti ekudzivirira panguva yekuburitswa kwejab.
VaBrits vaisazove vekutanga kuva nejekiseni repasipoti rinomisikidzwa pasina zvinopihwa nevhoti. Italy neFrance vatotora nzira dzehutano kunyangwe paine kuratidzira kwakakura, uye dzimwe nyika dzeUS nematunhu akafanana New York City vakurudzira mabhizimusi eAmerica akazvimirira kuti asimbise mvumo yekudzivirira nenjodzi yavo. Dzimwe nyika dzakasundidzira kurambidza mapasipoti akadaro, zvichitungamira hurumende yemubatanidzwa ((izvozvi) kuzvisiyira kumatunhu nemabhizinesi.